Nei ndiri paBlogBurst? | Martech Zone
China, Kukadzi 22, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndine chokwadi chekuti zvemukati hazvisi zve chero munhu, asi bhurogu yangu inoramba ichibudirira. Kutenda ku Jim uyo akatondisheedza ndichiona ndichienda kune 4,000 yepamusoro paTechnorati.
Kubva kuBlogburst: Une Blog Huru? Hongu, ndinofunga ndinodaro.
Isu tinoisa mablog sezvako pane makuru ma media masaiti. Kwete… chaizvo, haudaro.
Pane chero munhu ari kuwana chero zviwanikwa neichi sevhisi?
WordPress: Maitiro Ekuvaka iyo Tag Cloud Peji
Feb 23, 2007 at 12:53 PM
makorokoto nekupaza kusvika pamazana mana ezviuru
Feb 23, 2007 at 8:48 PM
Ndatenda, Steven! Iyo Z-Rondedzero yabudazve, ndakaita chifukidziro cheNetscape.com na imwe yemapositi angu uye ndakakomborera a WordPress plugin. Ivo vatatu veavo vakawana toni yekuburitswa kweblog kwakandipfura chaiko. Basa rakawanda kumberi !!!
Kukadzi 27, 2007 na1: 14 PM
Blog Burst yakandiramba. 🙂
Kukadzi 27, 2007 na1: 47 PM
Ini handizonetseke, chita ... hazvina kuita sevari kundiitira chero chinhu!